သံပုရာပင်စိမ်း - လျှောက်လွှာ
ဆွဲဆောင်အားကောင်းလှတဲ့သူ့နာမညျကပြောပါတယ်အဖြစ်ပိုပြီးဘုံအစိမ်းရောင်နှင့်ခရမ်းရောင်ပင်စိမ်းမတူဘဲ, သံပုရာပင်စိမ်း, သံပုရာ၏သိသာအရသာကွဲပြားနေသည်။ သံပုရာပင်စိမ်းထံမှ Applications ကိုမိမိအကျော်ကြားဆွေမျိုးသားချင်းများ၏ထိုထက်လျော့နည်းသည်မဟုတ်, ပိုပြီးတိတိကျကျကျနော်တို့ကိုအောက်တွင်ဖော်ပြရန်အပေါငျးတို့သနည်းလမ်းများအကြောင်းကို။
ချက်ပြုတ်အတွက်ပင်စိမ်း၏လူကြိုက်အများဆုံးအသုံးပြုမှုတစ်ခုမှာအအေးနှင့်ပူအချိုရည်ပြင်ဆင်ထားရန်ဖြစ်ပါသည်, သို့သော်အအေးရာသီဝေးသောမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အထူးအာရုံစိုက်မှုအထူးသဖြင့်, ထိုပူနွေးလာအဖျော်ယမကာမှပေးဆောင်ရပါမည် - လက်ဖက်ရည်။ ပင်စိမ်းရွက်စိုက်ခင်းလုပ်ကိုင်မည်နှင့်သာမန်အနက်ရောင်လက်ဖက်ရည်စဉ်အတွင်းထည့်သွင်းနိုင်ပါသည်, သူတို့သည်ပင်စိမ်း၏ပိုကောင်းစည်းရေပွက်ပွက်ဆူနေသော၏တစ်လီတာနှင့်ပတ်သက်ပြီးသီးခြားစီပင်လယ်အော်ပြသနာတွေတစ်အရသာအများဆုံး, ဒါပေမယ့်လည်းမကောင်းမသာရနိုင်ရန်အတွက်အံ့သြဖွယ်အနံ့နှင့်အဖျော်ယမကာအမျိုးမျိုးပေး, ဒါပေမယ့်။ သွန်းလောင်းလုံလောက်သော strain တစ် 10-15 မိနစ်ပြုတ်ရည်ပြီးနောက်နှင့်ဆန္ဒရှိလျှင်ပျားရည်ဘီလီယံဒေါ်လာလျော့ချမယ်။
ပင်စိမ်း - ခရမ်းချဉ်သီးရဲ့အကောင်းဆုံးမိတ်ဆွေလူကြိုက်အများဆုံးကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများတစျဦး၏ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေစဉ်အတွင်းတစ် sprig သို့မဟုတ်ဆားရည်အိုင်၏ပြင်ဆင်မှုနှစ်ခုထပ်ထည့်ဖို့မမေ့မလြော့ပါ။ အကြောင်းမူကား, အထူးသဖြင့်သင့်လျော်သောမွှေးကြိုင်သောဟင်းသီးဟင်းရွက်ဝက်အူချောင်း, အထူးသဖြင့်ဒချက်ပြုတ်နည်းများ၌တည်ရှိ၏ ခရမ်းချဉ်သီးဆော့စ် နှင့် အိမ်လုပ် pesto ။ တစ်ခုမှာရိုးရိုးအရွက်နှင့်အတူဆားကြိတ်ဆုံနှင့်ကြိတ်ခြင်းနှင့်လိုအပ်သောလျှင်, ရေခဲသေတ္တာထဲမှာသိမ်းထားတစ်ဇွန်းဟင်းချိုအတွက်ကွက်လပ်များနှင့်ပူအစားအစာများဖြည့်စွက်ခြင်း, သစ်တော်သီး, အသီးများနှင့် berry သီးအသီးအချိုရည်၏သံပုရာပင်စိမ်းမှတ်စုယိုဖြည့်ဆည်းခံရနိုငျနိုငျသညျ။
အမှန်ဆိုသည်ကား, သံပုရာပင်စိမ်းတစ်အရသာအစားအစာချက်ပြုတ်နည်းများအတွက်၎င်း၏အသုံးပြုမှုကာလအတွင်းထုတ်ဖော်ပြသ။ လတ်ဆတ်တဲ့အခြောက်ပုံစံ၌ကာလ၌ရှိသကဲ့သို့, အရွက်ဟင်းချိုနဲ့စွပ်ပြုတ်, အသားများထို့အပြင်နှင့်အတူကိုပြင်ဆင်အထူးသဖြင့်သူတို့အားဆက်ပြောသည်နိုင်ပါသည်။ သံပုရာပင်စိမ်းအမဲသားနှင့်ဝက်သားအဖြစ်စံပြကုမ္ပဏီဖြစ်မည်, ကြက်ဟင်းလျာများနှင့်ဂိမ်း: အသားစကားပြောသော။ ထို့ပြင်သံပုရာပင်စိမ်းအဖြူငါးတန်းနှင့်အတူကောင်းစွာတတ်နှင့်အမှန်ပင်, ကမဆိုအခြေခံပါဝင်ပစ္စည်းများရန်ပြီးပြည့်စုံသောအဖော်ဖြစ်နိုငျသညျ, ထင်ရပေသည်။
သငျသညျအနာဂတျအတှကျဟင်းသီးဟင်းရွက်ရိတ်ချင်ပေမယ့်သင်အကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာများ၏တိကျသောပင်စိမ်းမှတ်စု add ချင်ကြဘူးဆိုရငျ, ပင်စိမ်းအနည်းငယ် sprig မှောင်မိုက်အရပ်၌ရက်သတ္တပတ်၏စုံတွဲတစ်တွဲများအတွက်ပုံးရည်၌ထုံမွှန်းခံရနိုင်ပြီး, ထုပုလင်းထဲသို့တိုက်ရိုက်ရွက်ကုန်တယ်အရသာသံလွင်ဆီ၏ပြင်ဆင်မှု, များအတွက်အသုံးပြုနိုင်ပါသည်။
Oatmeal pudding - ကျန်းမာသန်စွမ်းအစားအစာများများအတွက်အရသာနှင့်ကျန်းမာချက်ပြုတ်နည်းများ
Rhubarb compote ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ရေခဲသေတ္တာ defrost ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
ဒါကနံနက်စာများအတွက်မြန်ဆန်အရသာများကို ပြင်ဆင်. ?
လေလံပွဲမှာ, သငျသညျသူလူးစ Hendrix နဲ့ Andy Warhol နေထိုင်တဲ့အခန်းများ၏တံခါးများဝယ်နိုင်
မက်ဒေါနားဓာတ်ပုံပြပွဲမှာအရက်မူးနေတဲ့သခင်အရှင်အဖြစ် လာ. ,
ယင်းအရှုပ်တော်ပုံသမီးသုံးယောက်နှင့်အတူထွက်လာ၏ကတည်းကပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အ Lisa Marie Presley ဆီမှာဆိုရင်
မီးဖိုချောင်များအတွက် Reylingovye စနစ်က
ဆဲလ်ဆာကခုန် - ခုန်ဖို့ဘယ်လိုမူရင်းသမိုင်း, အရင်ကဆိုရင်များအတွက်အကြံပြုချက်များ
ဗလီ Kampung အာကာသ
ဆံပင်ပုံစံတွေ - နွေရာသီ 2014
သစ်သား upholstered ကုလားထိုင်
Sinusitis - ရောဂါလက္ခဏာများနှင့်ကုသရေး
မီးဖိုချောင်ထဲမှာလိုက်ကာ - ဘယ်လိုတစ်ခုစံပြရွေးချယ်ဖို့?
ဖေဖော်ဝါရီလ 23 ရက်နေ့တွင်လက်ဆောင်များလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ